लक डाउनमा हाम्रो सम्पर्कमा आउने विद्यार्थीलाई सहयोग गर्छौँ : महामन्त्री पाण्डेय (भिडियो) - Chinari Post
जेष्ठ ४,२०७९ / ०९ : ४३ अपरान्ह / 2022-05-18 09:43 pm
महामन्त्री, नेपाल विद्यार्थी संघ
लकडाउन लामो समयसम्म रहिरह्यो । अहिले समय कसरी विताइरहनुभएको छ ?
लकडाउन लम्बिएर १ महिना बितिसकेको छ । सरकारले गरेका निर्णयहरु पालना गर्ने, स्वास्थ्य सचेतनामा ध्यान दिदै, लकडाउनको पालना गर्दै बितिरहेको छ । त्यसका साथसाथै नेविसंघको तर्फबाट राहतका काममा पनि जुटिरहेका छौँ । देशभरका विध्यार्थि तथा आम नागरिकहरुलाई सचेतना दिदै सावधानि अपनाउन आग्रह गर्दै आएका छौ । अहिलेको यो समयमा कोरोनाविरुद्दका विभिन्न गतिविधीमा नै केन्द्रित भएका छौ ।
पछिल्लो समय विद्यार्थीहरु अलपत्र परेका कुराहरु पनि बाहिर आएका छन । तर विध्यार्थी नेताहरु गुमनाम भए भन्ने आरोप लागेको छ नि ?
हामीले मात्र सबै कुराको समाधान गर्न सकिदैन । यसको बिषयमा सरकारलाई खबर्दारी गर्ने गरिरहेका छौ । अहिलेको समयमा सबैभन्दा बढी मारमा परेको समुदाय भनेको दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने र त्यसपछी विद्यार्थीहरु नै हुन । तिनको बिषयलाई सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन । त्यो बाहेक अरु समुदायले बरु ध्यान दिएको देखिन्छ । त्यसैले हामी नेविसंघका देशभरका विद्यार्थीहरुलाई त्यस्तो समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्न अपिल गरेका छौ । बिशेष गरेर डेरामा बसेका विद्यार्थीहरु अहिले समस्यामा परेका छन । तिनिहरुलाई सहयोग गर्नको लागि हामीले संम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेका छौ । जो जो संपर्कमा आउनुभएको छ, उहाँहरुलाई बसेकै स्थानमा गएर सहयोग पनि गरेका छौ ।
अहिलेको सामाजिक ट्रेण्ड हेर्ने हो भने राहत दिने, तस्बिर खिच्ने गरेको बढी पाईन्छ । जसले गर्दा आफुहरु अलपत्र परेको भए पनि राहत लिना आउनको लागि अफ्ठ्यारो मान्ने गरेको अवस्था छ । यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
यो कुरा सत्य नै हो । राहत लिएर आफुहरु त्यो स्तरका देखाउन नचाहने पनि छन । तर वास्तवमा जो साच्चिकै अलपत्र परेका छन तिनीहरु संपर्कमा आएको अवस्था पनि छ । कतिपय वडाहरुले राहत वितरण गर्दा विद्यार्थीहरु त्यहाँ जाने पनि गर्नुभएको छ, तर त्यहा नामावली नभएकै कारणले गर्दा पनी राहत नपाएको अवस्था छ ।
सरकारले गरेका कामकारबाही प्रती आम जनताको गुनासो बढ्दै गएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष भएर जति सशक्त रुपमा नेपाली काग्रेस र नेविसंघले त्यसको विरुद्व जसरी आवाज उठाउनु पर्ने त्यस्तो गरेको देखिदैन । किन होला ?
नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुदेखि नै दुइटा कुराहरु भन्दै आएको छ । यो अहिलेको संकटको समयमा कुनैपनी राजनीतिक पुर्वाग्रह छोडेर सरकारको साथमा छ । त्यस्तै नेविसंघले पनि यो समयमा सरकार कै साथ दिदै सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई कार्यन्वयन गराउनको निमित्त लागिरहेका छौ । यद्यपी सरकारले गरेका विवादित निर्णयहरुको भने हामी बिरोध गरी नै रहेका छौ । सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछी पनि हामी सामाजिक दुरी कायम गरेर त्यसको विरोध गर्यौ । त्यस्तै स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताको बिषयमा पनि आवाज उठायौ । त्यसैले अहिलेको समयमा सरकारलाई साथ दिदै उस्ले गरेका गलत निर्णयहरुलाई खबरदारी गर्ने गरेका छौ ।